Viber For PC (ကွန်ပြူတာမှာ Viber သုံးနိုင်ပါပြီ။ Video Call ပါရပါသည်.) .......................... ~ Latha Mobile 0945 000 1727
Viber For PC (ကွန်ပြူတာမှာ Viber သုံးနိုင်ပါပြီ။ Video Call ပါရပါသည်.) ..........................
1:51 AM ko pae Lay No comments
Posted by ဇော် မင်း သန်း Posted on 8/09/2013 with
ကွန်ပြူတာ အတွက် Viber ထွက်လာတာ မနဲ ကြာပါပြီ တချို့သောသူငယ်ချင်းတွေက အဆင်မပြေကြ ပါဘူး။ Install ပြီးတာနဲ့ ဖုန်းနံပါတ်ထည့်ပြီး အဲအဆင့်ကနေ ထပ်မတတ် တော့ပဲ တစ်နေကြပါတယ်။ ကျနော် ရှင်းပြပါမယ်။ အောက်က ကျနော့် ပေးထားတဲ့ viber ကိုဒေါင်းလိုက်ပါ..။
ကွန်ပြူတာတွင် install မလုပ်ခင် ကိုထည့်မဲ့ ဖုန်းနံပါတ်အတွက် ဖုန်းတလုံးရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အချိန်မရတာကြောင့် ပုံနဲ့ မပြနိုင်တာ ခွင့်လွှတ်ပေးပါဗျာ။ ကျနော့်စက်မှာ တည့်နည်းလေးအတိုင်းရေးပေးလိုက်ပါမယ်...
အရင်ဆုံး ဖုန်းမှာ viber အရင်ထည့်ပါ။ ပြီးရင် ဖုန်းက အင်တာနက်ကို ဖွင့်ထားပါ။
ကွန်ပြူတာတွင် install လုပ်ပါ။
ပြီးရင် ခုနကဖုန်းမှာ Viber ထည့်ထားတဲ့ ဖုန်းနံပါတ်ကိုပဲ ကွန်ပြူတာ Viber မှာ ထည့်ပေးလိုက်ပါ။
Code ဖြည့်ရန် ပြလာပါမယ်။ ခနနေရင် မိမိဖုန်းရဲ့ Viber ထဲကို ကုတ်နံပါတ် ပို့ပေးပါမယ်။ အဲကကုတ် နံပါတ်ကို ကွန်ပြူတာတွင်ဖြည့်လိုက်ပါ....ဒီအဆင့်ပြီးရင်တော့ အဆင်ပြေပါပြီ...) ....
ကဲ သူငယ်ချင်းတို့ ဒီလောက်ဆို လုပ်လို့ အဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ်..။ အဆင်မပြေသောသူငယ်ချင်းများ ရှိပါက ကျနော့် အကောင့်ကို အက်လာပါဗျာ Teamviewer ချိတ်ပြီး လုပ်ပေးပါမယ်။Teamviewer သာ ကွန်ပြူတာမှာ install ထားပါ...။ PC အတွက် Viber ရဲ့ ပိုထူးခြားတာက Video Call ပါ free ခေါ်ဆိုနိုင်ပါတယ်...။
အောက်ကလင့်မှာ စိတ်ကြိုက် ဒေါင်းယူနိုင်ပါပြီ ဗျာ....။
** Step-1.အောက်ကDownload Viber For PC ကိုနှိပ်လိုက်ပါ
>>>>>Download Viber For PC<<<<<
Posted in: ဆော့ဝဲ